१०.३२ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न एभरेष्ट बैंकले डाक्याे साधारण सभा, बुकक्लाेज कहिले ? - Arthasansar
१०.३२ प्रतिशत लाभांश पारित गर्न एभरेष्ट बैंकले डाक्याे साधारण सभा, बुकक्लाेज कहिले ?
विहीबार, ०९ मंसिर २०७८, ०७ : २६ मा प्रकाशित
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेकाे छ ।
बैंककाे हिजाे (मंसिर ८ गते, बुधबार) बसेकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले गरेकाे निर्णय अनुसार बैंककाे सत्ताइसाैँ वार्षिक साधारण सभा पाैष १ गते, बिहीबार एभरेष्ट बैंक लिमिटेडकाे केन्द्रिय कार्यालय, लाजिम्पाट, काठमाडाैँमा बिहान ११:३० बजेदेखि सुरू हुनेछ ।
त्यसैगरी, बैंकले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि मंसिर १७ गते एक दिन बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले, मंसिर १६ गतेसम्म नेप्सेमा काराेबार भई कायम भएका शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।